Ryanair inotaurira vafambi kuti vatore bhazi mushure mekumhara panhandare isiriyo 480 mamaira kure
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ryanair inotaurira vafambi kuti vatore bhazi mushure mekumhara panhandare isiriyo 480 mamaira kure
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Ireland Kuputsa Nhau • nhau • Romania Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vafambi vari kuyedza kukwira Britain kune rimwe zuva rechando vakasara vakadzikira munhandare yendege yeRomania kwerinenge zuva rimwe mushure mekunge ndege yavo 'yatsauswa'. Vafambi vaitarisira kumhanyisa nekukurumidza kuenda kuGirisi vakazviwanira ivo maawa makumi maviri nemana uye nyika nhatu dziri kure.
Ndege yeRyanair ichienda kuTesaloniki kuGreek yakasiya Stansted Airport yeLondon neChishanu manheru kune yaifanirwa kunge iri maawa matatu ndege. Nekudaro, mamiriro ekunze asina kunaka kuGreek akakonzera kuti vashandi vekabhini vatsause kubhururuka uye nekuparadza tariro yeavo vari muchikepe vari kutsvaga kunakirwa nokunonoka-kunwa-usiku kana kudya kuguta rekuchamhembe kweGreek.
Panzvimbo pekutsausa vafambi 200 kuenda kuAthens kana nhandare dzendege dzakapoteredza Albania neMacedonia, ndege iyi yakamhara kuchamhembe, ichiyambuka Bulgaria ichienda kuguta reRomania reTimisoara.
Vanga vatononokerwa zvakanyanya, vafambi vakatsamwa apo ndege yakapa kuvakwidza kuenda kuTesaloniki - rwendo rwunopfuura makiromita mazana manomwe nemakumi manomwe raizotora maawa masere kuti vapedze.
Vanenge makumi masere nevapfumbamwe vanhu vakaramba kupihwa, uye pachinzvimbo vaifanira kumirira munhandare usiku hwese. Vakazokwira ndege yeAegean Airlines yakarongedzwa nehurumende yeGreek, vachizosvika muTesaloniki nguva diki diki pakati pa89pm neMugovera, anenge maawa makumi maviri nemana azara mushure mekufamba.
Chiitiko ichi chakamutsa hasha pamasocial media, nevazhinji vachifungidzira kuti danho raRyanair rekutsausa nzira yese kuenda kuTimisoara yaive nzira yekuchengetedza mari, sezvo ndege yendege inoshandisa nhandare sehwaro hwekushanda.
Achikumbira ruregerero nezvekutsauka kwaive "kupfuura" kwavo, Ryanair akati vatengi vaigona kupihwa murairidzi kwavanoenda kana kuti vangamirira imwe ndege kuti igadzirwe mushure mekunge "yasvika kazhinji muTimisoara."
Chiitiko ichi chinouya isingasviki vhiki mushure mekunge ndege yendege yeIreland yavhoterwa mushambadzi akaipisisa anoshandira nhandare dzeUK, achingowana chiyero che40 muzana kubva kuvanhu vanopfuura 7,900 XNUMX vakaongororwa. Iri ndiro gore rechitanhatu mumutsara iyo ndege yendege yakawana rukudzo runopokana.